Tenisy – «Jeunes La Réunion” : nandrombaka fandresena i Sariaka | NewsMada
Tenisy – «Jeunes La Réunion” : nandrombaka fandresena i Sariaka
Nisongadina indray i Radilofe Sariaka, ilay Malagasy mizaka zom-pirenena frantsay, nandritra ny fifaninanana tenisy, nokarakarain’ny «Bourbon Olympique Tennis Club» (BOTC), notanterahina tatsy amin’ny Nosy La Réunion, ny faran’ny herinandro lasa teo. Norombahin’i Sariaka mantsy ny fandresena, teo amin’ny sokajy 17 / 18 taona.
Resiny teo amin’ny famaranana, tamin’ny seta 2 no ho 1 (7/5 ; 3/6 ; 6/1), i Nastassia Chamou. Niady ny lalaon’izy mirahavavy, indrindra, fa ny seta voalohany, izay lasan’i Sariaka. Nanohitra kosa avy eo ilay mpifanandrina taminy ka azony izany. Hita ho nihareraka kosa i Chamou, teo amin’ny seta fahatelo farany. Nanao fahadisoana betsaka izy, teo amin’ny lalao nataony, na tamin’ny famerenan-baolina na teo amin’ny fiarovantena, hany ka mora tamin’i Sariaka ny naka ny fandresena.
Nanambara i Sariaka fa ao anatin’ny fivoarany tanteraka izy ankehitriny. Manantena ny tenany fa hijanona eo amin’izay tanjany izay, mandra-pahatonga ny fiadiana ny ho tompondakan’i Frantsa, izay mbola hatrehiny. Notsiahiviny fa tsy nahadingana ny fihodinana voalohany, tamin’izany fifaninanana izany, ny tenany tamin’ny taon-dasa.
Marihina fa efa nandrombaka ny fandresena, teo amin’ny sokajy “sénior”, notanterahina tany La Réunion, hatrany ny tovovavy, herinandro lasa izay.